Amanqaku ngu UJenn Lisak Golding
NgoMvulo, Septemba 21, 2020 NgoLwesibini, Septemba 22, 2020 UJenn Lisak Golding
Ngaba wakha wajongana nengxaki enxulumene nenkampani yakho? Ewe, awuwedwa. Unxibelelwano lwentlekele lunokuba lukhulu kakhulu - ukusuka kwimpendulo elibazisekileyo malunga nento ekufuneka uyithethile kuyo yonke into ekuthethwa ngayo kwezentlalo eza kuthi ichonge ukuba ingaba yingxaki yokwenyani na. Kodwa phakathi kwesiphithiphithi, kuhlala kubalulekile ukuba nesicwangciso. Sisebenze nabaxhasi beqonga lethu lokujonga ezentlalo
Ngaba ingxaki yeshishini okanye injongo yokusebenza ekucinezelayo mva nje? Amathuba sisisombululo sayo kwiihenjisi kwitekhnoloji. Njengokufunwa lixesha lakho, uhlahlo-lwabiwo mali kunye nobudlelwane kwezamashishini bonyuka, elona thuba lakho lokuhlala uphambili kwaba khuphisana ngaphandle kokulahlekelwa yingqondo kukuzenzekelayo. Utshintsho kwindlela yokuziphatha komthengi yokufuna izinto ezizenzekelayo Sele uyazi ukuba i-automation ayisiyiyo-brainer ngokwempumelelo: iimpazamo ezimbalwa, iindleko, ukulibaziseka, kunye nemisebenzi yezandla. Kubaluleke kakhulu, yile nto abathengi ngoku abayilindeleyo.
I-TinEye: Ukuguqula ukuKhangela kweMifanekiso
NgoMgqibelo, ngoMeyi 16, 2020 NgoMgqibelo, uJanuwari 2, 2021 UJenn Lisak Golding
Njengokuba iibhlog ezininzi kunye neewebhusayithi zipapashwa mihla le, inkxalabo eqhelekileyo kukwebiwa kwemifanekiso oyithengileyo okanye oyenzileyo ukuze uyisebenzise ngokwakho okanye emsebenzini. I-TinEye, injini yokukhangela umfanekiso eguqukayo, inika abasebenzisi amandla okukhangela i-url ethile yemifanekiso, apho unokubona ukuba mangaphi amaxesha afunyenwe kwimifanekiso kwiwebhu kwaye zazisetyenziselwa phi. Ukuba uthenge umfanekiso wesitokhwe kwimithombo efana neyethu
Isikhokelo sokuThengisa nge-imeyile sokuGqibela ngeHolide
NgoLwesithathu, uDisemba 7, 2016 NgoLwesine, Septemba 24, 2020 UJenn Lisak Golding
'Lixesha lokuthengisa ngeholide, kunye nesoftware yethu yokuqinisekisa isoftware exhasa uNeverBounce wenze isikhokelo sokuthengisa nge-imeyile sokugqibela solonwabo lwakho lokujonga. Idatha yeNational Retail Federation iyaqhubeka nokubonisa ukuba inkcitho iyenyuka kulo nyaka, ngakumbi kwi-Intanethi kwaye iqhutywa yimizamo yedijithali. Ukuthengisa nge-imeyile ikakhulu kudlala indima enkulu, kwaye abathengisi kufuneka bahlale ngaphezulu kokugcina uluhlu lwabo lucocekile kwaye lutsha ukukhusela igama labo lokuthumela kunye nokuhanjiswa. Abanye
NgeCawa, Oktobha 23, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 UJenn Lisak Golding
Impendulo emfutshane? Ewe. Ubuncinci ngokwesiqhelo, kwaye "ngokwesiko" sithetha ukufuna ulwazi lweendwendwe ngaphambi kokuba ubonelele ngexabiso, okanye usebenzise umxholo, umxholo omileyo njengenkuthazo. Masibuyisele ilori kwimvelaphi ethile: Emsebenzini wethu sinceda abathengi ukuba bandise uguquko lwabo kwi-Intanethi, siqaphele into ebalulekileyo, engaguqukiyo kwiindwendwe zewebhu ezigcwalisa iifom zesikhokelo. Kukho isizathu esihle soko. Ukuziphatha komthengi kuyatshintsha, ikakhulu ngenxa yetekhnoloji, ulwazi